Ny sakafo Dukan - ilay mandeha, mahita ny tsiambaratelo! | Nutri Diet
Mahalana izany olona tsy nanandrana izany velively karazana sakafo na efa nihinana sakafo nandritra ny androm-piainany. Androany dia misy sakafo an-jatony amin'ny karazana rehetra izay mampanantena fa ho very andiana kilao amin'ny fotoana firaketana. Nandritra ny taona vitsivitsy dia lamaody be io ny sakafo Dukan, drafitra mampihena ny lanjany izay nahazoana laza eran'izao tontolo izao manolo-kevitra ny hihena amin'ny fomba voajanahary tanteraka.
Ny sakafo Dukan dia misy 4 phase izany dia hanampy ilay olona hampihena lanja amin'ny tena haingana sy mahay mandanjalanja. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'io karazan-tsakafo io ianao dia aza hadino ny antsipiriany ary mariho tsara ny toetrany sy ny loza izany dia mety hiteraka fahasalamana.
1 Inona ny sakafo Dukan?
2 Dingana amin'ny sakafo Dukan
3 Loza ateraky ny sakafo Dukan
Inona ny sakafo Dukan?
La Sakafo dukan dia sakafo proteinina izay mitady ny fihinanana proteinina amin'ny sakafo isan'andro ary misoroka amin'ny fotoana rehetra ny fihinanana gliosida. Amin'izany, ny vatana dia afaka mandany ny tavy miangona ao anatiny ary amin'izany fomba izany dia mampihena ny lanjany ao a haingana sy mora. Mandritra ny dingana roa voalohany amin'ity sakafo ity, ny kilao napetraka raha mandritra ny roa farany kosa dia mitazona ny lanjany azo, manakana ny antsoina vokany.
Dingana amin'ny sakafo Dukan
Fanafihana: Ity iray ity dingana voalohany Izy io dia miavaka amin'ny fiovan'ny metabolisma mihitsy sy ny very kilao dia antitra kokoa. Ny faharetan'ity dingana ity dia miankina amin'ny habetsaky ny kilao tadiavin'ilay olona ho very. Mety haharitra iray andro ka hatramin'ny iray andro herinandro. Amin'ity dingana ity dia ny fihinanana sakafo manan-karena ihany proteinina biby toy ny akoho tsy misy hoditra, atody, trondro na hena mena. Ireo sakafo ireo dia azo alaina tsy misy fetrany ary afaka misafidy ny vola laniny ny olona. Mifanohitra amin'izany no voarara tanteraka ny sakafo lehibe toy ny voankazo. legioma, vary na voamadinika.
Dingana fitsangantsanganana: Amin'ity dingana ity, sakafo vaovao amin'ity sakafo ity ka mandanjalanja sy miovaova be kokoa. Miaraka amin'ny proteinina dia efa afaka mihinana legioma tsy misy fetra ianao. Ity dingana ity dia matetika maharitra manodidina roa volana izay matetika no fotoana lanina mandra-pitangan'ilay olona hahatratra ny azy lanja mety. Mandritra io dingana io dia misy sakafo sasany toy ny vary, ovy na legume.
Dingana fanamafisana: Amin'ity dingana ity ny vokan'ny fikomiana matahotra foana izany dia mitranga amin'ny ankamaroan'ny antsoina hoe sakafo fahagagana. Mandritra io dingana io, ny fampidirana sakafo sasany manan-karena amin'ny gliosida. Matetika izy io dia maharitra arakaraka ny kilao izay very ilay olona resahina, indrindra ireo kilao very ampitomboina folo ary azo arak'izany ny andro maharitra dingana fahatelo ity. Amin'ny dingana fanamafisana dia tsy manary lanja intsony ianao fa mitazona izany inona no zava-bita tamin'ny dingana roa teo aloha. Afaka mihinana sakafo voarara taloha ianao toy ny voankazo, vary, fromazy na mofo.
Dingana fanamafisana: Ity no dingana farany farany amin'ny resabe Sakafo dukan ary ao anatiny dia efa nahatratra ny lanja mety ary tokony hotehirizina iray andro isan-kerinandro. Mandritra io andro io dia tsy tokony mihinana afa-tsy proteinina ianao hanonerana ny fihoaram-pefy amin'ny andro hafa amin'ny herinandro. Soso-kevitra ny hanaraka an'io dingana io mandritra ny ny sisa amin'ny fiainana ary amin'izany fomba izany dia tazomy ny lanjany mety ary hialana amin'ny fitomboan'ny kilao.
Zava-dehibe ny ahatsiarovanao fa mba hahomby 100% amin'ny sakafo dia mila mihinana vitsivitsy ianao Rano 12 vera isan'andro ary sotro iray ovy bran. Ity sotro fihinanana ity dia azo alaina mifangaro amin'ny yaourt na atody.
Loza ateraky ny sakafo Dukan
La Sakafo dukan Tsy isalasalana fa io no sakafo malaza indrindra ankehitriny ary maro ny olona nanapa-kevitra ny hanaraka azy. Na eo aza izany, na eo aza ny zavatra maro lazain'ny olona, ​​dia manaiky izany ny ankamaroan'ny mpandinika ny sakafo sakafo tena mampidi-doza amin'ny fahasalamana. Satria sakafo fihinan'izy ireo izany PROTEININA ary izay ahilika ireo sakafo tena ilaina amin'ny vatana dia mety hiteraka olana lehibe na digestive sy metabolic haavon'ny.
Amin'ny dingana voalohan'ity sakafo ity, ny fihinanana gliosida, io tsy fahampian'ny gliosida io dia miteraka a lhl fa misy koa ny soritr'aretina hafa ateraky ny tsy fahampian'ny angovo toy ny havizanana, havizanana na aretin'andoha. Ny iray amin'ireo loza ateraky ny sakafo toy izany dia ny fironany miforona vato asidra urika izay mety hiteraka fisehoan'ny antsoina hoe vato voa. Ny sakafo Dukan dia malaza koa amin'ny miteraka fahasarotana olana amin'ny fitohanana eo amin'ny olona sasany noho ny tsy fahampian'ny fibre ao anaty sakafo. Mba hanoherana an'io olana io dia manery anao handray io drafitra io iray sotro fihintsanana voahodina mandritra ny faharetan'ny sakafo voalaza.
Araka ny efa hitanao, dia misy tombony maro izay Sakafo dukan Fa toy ny zava-mitranga amin'ny ankamaroan'ny sakafo fahagagana, misy ihany koa ny loza marobe amin'ity karazana drafitry ny fihenan-danja ity. Raha manapa-kevitra ny hanaraka an'ity karazana sakafo ity ianao dia ho very kilao fanampiny ny zavatra tsara indrindra dia ny manatona manam-pahaizana manokana izay hanome torohevitra anao raha tena mendrika hanaraka an'io karazan-tsakafo io ianao. Manantena aho fa nodioviko ianao fisalasalana rehetra momba ny sakafo malaza Dukan ary misafidy ny làlana mety indrindra.
Avy eo dia handao anao aho horonantsary manazava mba hiharihary fa mazava kokoa ny hoe inona ny sakafo Dukan ary inona no mahatsara azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ny sakafo Dukan